A mara ụmụ akwụkwọ abụọ SS3 ikpe afọ 7 maka izu piano ụka – Carinsurancegeeks
Ụbọchị Mọnde gara aga, otu ụlọ ikpe dị na Lagos nọ ọdụ na Tafawa Balewa Square, Nigeria, TBS, mara ụmụakwụkwọ abụọ Senior Secondary School (SSS 3) , Udochukwu Anyanwu na Udo Chibike (a na-akpọ Lasis), mkpọrọ afọ asaa nke ọ bụla maka ịwaba n’ụlọ akwụkwọ. ụka na izu piano.
Ụmụakwụkwọ a kwetara ikpe mkpegharị ikpe ma bụrụ ọkaikpe Yetunde Adesanya mara ha ikpe .
Ntaramahụhụ ha ga-amalite na Jenụwarị 19, 2017, ụbọchị mbụ a kpọchiri ha n’ụlọ mkpọrọ, dịka ọkaikpe siri kwuo.
N’abalị iri na itoolu n’ọnwa Jenụwarị afọ 2017, Ụlọikpe Magistrates dị na Legọs nyere ndị omekome ahụ n’ụlọ mkpọrọ, na June 19, 2017, e boro ha ebubo ma kpụpụ ha n’ihu ọkaikpe Yetunde Adesanya.
GỤỌ KWESỊRỊ: Onye nkuzi mara ikpe ọnwụ maka ụmụ akwụkwọ r8ping 13
E boro ha ebubo na March 27, 2018, maka ọtụtụ ebubo ịgba izu n’ime nnukwu mpụ, gụnyere ịpụnara mmadụ ihe, bụ nke ha gọnarịrị ikpe ha. Oriakụ AO Oluwafemi, onye osote onye isi na-ahụ maka ikpe gbasara ọha na Lagos steeti kpọrọ ndị akaebe atọ wee gosi ihe ngosi na Disemba 4, 2018.
Anyanwu na Chibike gara n’ihu ikpe n’ime ikpe na February 4, 2019, n’etiti ikpe ahụ, bụ nke ụlọikpe kagburu mgbe ha kwubiri na e nwere prima facie ikpe megide ha.
Mgbe a nwara ikpe ahụ na Machị 4, 2022, ndị mkpọrọ ahụ họọrọ nkwekọrịta nkwekọrịta, ma yigharịrị ntaramahụhụ ahụ ruo Machị 29, 2022.
Ka ejidechara ya ọzọ maka ebubo e deziri maka izu ohi n’ihu ọkaikpe Adesanya ụnyahụ, Anyanwu na Chibike gbanwere akwụkwọ ikpe ha na-ekpeghị ikpe.
O nwere ike ịmasị gị: Otu anyị si tọọrọ site na Facebook – ndị a na-enyo enyo
Ọkaikpe ahụ gbakwụnyere, “Ụlọikpe ahụ achọpụtala n’aka ndị a na-azara ọnụ na ha ji aka aka ha banye na nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ, na-enweghị mmanye ọ bụla, na ọ dịghịkwa nkwa e kwere ha,” ka ọkàikpe ahụ gbakwụnyere.
“Atụlela m nkwekọrịta mkpesa na nkwekọrịta ikpe dị n’etiti ndị otu ahụ, nke ekwenyero ma mebie ya nke ọma.” Ekwenyesiri m ike na ọnọdụ nkwekọrịta ahụ ziri ezi.
“Ama m gị, Udochukwu Anyanwu, na Udo Chibike ikpe maka izu ohi, a marakwa gị ikpe dịka ebubo.”
Next story Foto Amos Yee dị n’ụlọ mkpọrọ US dị n’elu ịntanetị